ख्याल गरौं हैं, तामाको भाडामा भुलेर पनि नराख्नुस् यी चिज, विष लागेर मृत्यु पनि हुन सक्छ !पुरा पढ्नु होस । – ईमेची डटकम
ख्याल गरौं हैं, तामाको भाडामा भुलेर पनि नराख्नुस् यी चिज, विष लागेर मृत्यु पनि हुन सक्छ !पुरा पढ्नु होस ।
Posted byईमेची डेक्स November 2, 2019 December 11, 2019 Leaveacomment on ख्याल गरौं हैं, तामाको भाडामा भुलेर पनि नराख्नुस् यी चिज, विष लागेर मृत्यु पनि हुन सक्छ !पुरा पढ्नु होस ।
अचार अचार तामाको भाडामा कहिलै पनि राख्नुहुन्न । अचारमा भएको तत्व कपर पोइजनिङ्गमा परिणत हुन्छ, जसको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ । दही दहीलाई तामो भाडामा राखेमा त्यसमा भउको पोषक तत्व उल्टै विषमा परिणत हुन्छ । जसको सेवनले मानिसलाई रिएक्सन गर्छ । दूध दुध तामाको भाडामा राख्दा दही जस्तै दुधमा भएको पोषक तत्व विषमा परिणत हुन्छ । यसको सेवन गर्दा मानिसलाई बमेट हुने, झाडापखाला, पेट दुख्ने गायतका समस्या हुन्छन् ।
लेमन जूस लेमन जूस पनि तामाको भाडामा राख्नुहुन्न । यसमा भएको एसिड तामाुंग मिले रिएक्ट हुन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । यसको प्रयोगले ग्याष्टिक, पेट दुख्ने समस्या पैदा हुन्छ । अमिलो खालका खानेकुरा अमिलो खालका फलफुल, तरकारी लगायतका चिजहरु तामाको भाडामा राख्नुहुन्न । यसरी तामाको भाडामा राखेको खाएमा कमजोर भइने, अल्छी लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने र बेहोस हुने समस्या हुन्छ ।
२. तामामा प्राकृतिक रुपमा ओलीगोडिनेमिकको रुपमा (ब्याक्टेरियामा धातुलाई स्टेरलाइज्ड) मानिन्छ । यसमा राखिएको पानीको सेवनले पेटमा भएको ब्याक्टेरिया सजिलै नष्ट गर्न सक्छ । यस्तै, पानीजन्य रोग डाइरिया, कमलपित्तजस्ता रोग रोक्न पनि उपयोगी मानिन्छ । ३. थाइरेक्सिन नामक हर्मोनको असन्तुलनका कारण थाइराइडको रोग लाग्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले शरीरमा थाइरेक्सिन हर्मोन नियन्त्रित हुन्छ र यो हर्मोन निकाल्ने ग्रन्थीको कार्यप्रणालीलाई पनि नियन्त्रित गर्छ ।
७. एसिडिटी, कब्जियतजस्ता पेटका समस्या भएका मानिसका लागि तामाको भाँडामा राखिएको पानी अमृतसमान हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यदि शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न चाहने हो भने तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ घण्टा राखिएको पानी पिउनुहोस् । यसबाट पेट फुल्ने समस्या र पाचनप्रणालीका समस्या हट्छन् । ८. तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले चाउरी पर्ने प्रक्रियालाई पनि ढिलो गराइदिन्छ । यसले नयाँ र स्वस्थ छालाको कोशिकाको उत्पादनमा पनि मद्दत गर्छ । ९. यसले रगतको विकार र कमी हुने समस्या हट्छ । पोषक तत्वलाई शोषेर रक्तवाहिनी नलीहरुमा यसलाई नियन्त्रित गर्छ ।
तामाको औंठीले सूर्यको बल बढाउँछ । सूर्यदेवको कृपाले घरपरिवार र समाजमा मानसम्मान पाइन्छ ।तामाको औंठी लगाउँदा त्यसको औषधीय गुण पनि शरीरले प्राप्त गर्छ । रगत सफा हुन्छ ।तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउँदा स्वास्थ्यलाभ हुन्छ । औंठी लगाउँदा फाइदा हुने नै भयो ।तामाको औंठीको असरले पेटसम्बन्धी रोगबाट छुटकारा पाइन्छ ।
तामा औंलामा लगाउँदा छाला पनि चमकिलो हुन्छ ।हिन्दू धर्ममा सुन, चाँदी, तामा तीन धातुलाई पवित्र मानिएको छ । पूजापाठमा यी धातुहरूको उपयोग सबभन्दा धेरै हुन्छ । यसबाहेक यी धातुको औंठी पनि मानिसहरूले लगाउँछन् ।तामाको औंठी सूर्यको औंला अर्थात् अनामिकामा लगाउनुपर्छ । कुण्डलीमा सूर्य दोषको असर कम हुन्छ ।सूर्यका साथै मंगलको अशुभ असरलाई पनि तामाको औंठीले कम गर्छ ।आयुर्वेदका अनुसार, तामाको भाँडोले रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । यही लाभ तामाको औंठी लगाउँदा पनि हुन्छ ।
Posted byईमेची डेक्स November 2, 2019 December 11, 2019 Posted inरोचक